Agoosto 15, 2012 5:33 b 0
Gaalkacyo, Aug 15- Ganacsada caan ka ah Gaalkacyo ayaa ku dhintay affar qof oo kalana waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxaysa Laanta dusmada iyo beesha Cagaaran ee isla gobolka Mudug.
Affar qof oo kale ayaa ku dhaawac-may shilkaasi kuwaasoo qaarkood la sheegayo in dhaawacoodu uu culus yahay, dadkaasi dhaawacmay ayaa dhamaantood saarnaa gaariga yar.
Kal hore ayay ahayd markii sidan oo kale gaari xamuula uu? ku dhacay gaari yar taasoo keentay inay halkaasi ku dhintaan 12 qof oo dhamaantoodba saarnaa gaariga yar, dhawaana meel u dhaw magaalada Garoowe waxaa shil gaari sidan oo kale ugu geeriyooday laba saxafi oo caana dhaawacna uu ka soo gaaray Fanaanada Soomaaliyeed Saado Cali Warsame.
Shacabka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo walaac ka muujiyay duqaymaha diyaaradaha dagaalka iyo maraakiibta shisheeya ay ka gaysanayaan magaaladaasi.